म्याडम, पन्ध्र लाखको कस्तो होला पलङ ? « Jana Aastha News Online
म्याडम, पन्ध्र लाखको कस्तो होला पलङ ?
प्रकाशित मिति : १८ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार १२:३८
पतिका लागि १५ लाखको पलङ ! नआत्तिनुहोला, यो भएकै घटना हो । ओमनका लागि राजदूत भएर अहिले मस्कटमा कार्यभार सम्हालिरहेकी म्यानपावरवाली शर्मिला पराजुली ढकालले पति विमलको रोजाइको कदर गर्दै नयाँ घरभाडाबापत डेढ करोड अग्रिम पेश्की दिइन्, उता जापानस्थित राजदूत प्रतिभा राणाले पनि विनोदको निम्ति १५ लाखको पलङ किनिन् । त्यही बिलको भुक्तानीका लागि एक जनाले अर्थ मन्त्रालय पुगेर बबाल मच्चाइन् भने अर्कीले छोरीज्वाईं आरजु र शेरबहादुरमार्फत भिटो लगाइन् ।
त्यत्रो पैसा पर्ने घर र पलङको मज्जा–नमज्जा के छ, सुत्नेले नै जान्लान् † तर, त्यो घर र पलङले अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखामा तहल्कै मच्चाएको छ । अर्थविद् डा.युवराज खतिवडा सोमबार साँझ मन्त्रीको रुपमा बहाली भएका छन् । सम्भवतः पलङको बिल हेर्न भ्याएका छैनन् । तर, बजेट महाशाखाका कर्मचारीले डाक्टर सा’ब मन्त्री हुनु केही हप्ताअघि धम्की खाइसकेका छन्, ‘नयाँ मन्त्री आएपछि तिमीहरुको हविगत के हुन्छ, हेरौंला !’ पोहोर केपी ओलीको जन्मदिन पारेर मस्कटबाट काठमाडौं उत्रिएकी शर्मिला एयरपोर्टबाट सोझै बालकोट पुगिन् र शुभकामना ‘टक्र्याइन्’ भन्ने सूचना वैदेशिक सहायता महाशाखाका ती हाकिमसँग रहेछ । त्यसैले मस्कटदेखि केपीको बर्थडे मनाउन काठमाडौं आइपुग्नेले बिताइहाल्छिन् कि भन्ने डर कर्मचारीमा छ । जापानबाट त १५ लाखको पलङ भयो, मस्कटमा दूतावास सञ्चालन र निर्माणका विविध शीर्षक गरेर शर्मिलाले अर्थमा पु¥याएको कूल बजेट छ, डेढ करोडको । शीर्षकमा उल्लेखित काम सम्पन्न भएका छैनन् ।
मन्त्रीले नै चाहँदा पनि यत्तिका रकम, यस्तो शीर्षकमा दिन मुस्किल पर्छ । तर, त्यही बजेट निकासा नगरिदिएबापत शर्मिलाले ‘तिमीहरुलाई देखाइदिन्छु’ भनिन् । उनले ‘देखाउने’ भनेको कुरा कर्मचारीहरुले अहिलेसम्म हेर्न पाएका छैनन् । उनका पति वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा भएको बेला एक महिलासँग अवैध ‘लिभिङ टुगेदर’ को आरोप लागी डिपोर्टमा परेका थिए । तिनै पतिलाई महँगो निवासमा सुताउने उनको रहर देखेर परराष्ट्रका हाकिमहरु पनि छक्क परेका छन् । डेढ करोड भाडाको घरमा सुत्ने उनका पति फ्लोरिङ रिसोर्स सोलुसन नामक म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक हुन् ।
अर्थलाई अर्को दबाब जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणाको पनि छ । उनलाई एउटा गाडी किन्ने चटारो छ । त्यसको बजेट हो, डेढ करोड । जापान, जसले आफ्नै देशमा संसारभर प्रचलित गाडी उत्पादन गर्छ । हामीकहाँजस्तो दुई सय पचास प्रतिशत भन्सार पनि लाग्दैन । भन्सारै लाग्ने फुल अप्सनका अत्याधुनिक जापानिज गाडी पनि नेपालमा ४०–५० लाखमा पाइन्छ । बिनाभन्सार डेढ करोड पर्ने जापानिज गाडी कस्तो हुन्छ होला ? अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ । प्रतिभासम्मका ज्वाइँ शेरबहादुर डेढ हप्ताअघि प्रधानमन्त्री थिए । छोरी आरजुको हुकुमी शासन साह्रै कडा थियो । त्यस्तो शासनमा त अर्थका अधिकारीले निकासा नदिएको बजेट अब उनले पाउलिन् कसरी ?
स्रोतका अनुसार, गएदेखि अहिलेसम्म कहिले के, कहिले के बहानामा अर्थ र परराष्ट्रका हाकिमलाई सताउँदै आएका यी दुई ‘लेडी एक्सिलेन्सी’ लाई फिर्ता बोलाउनुपर्छ भनेर विशेषतः हाकिमहरु जोडतोडले लागेका छन् । सम्भवतः सरकारले ‘अतिरिक्त योग्यता’ का कारण राजदूत भएर अस्वभाविक गतिविधि गर्ने यी दुईलाई केही दिनमै फिर्ता गर्दैछ । यसमध्ये प्रतिभा राजदूत भएको देश जापान नेपालको सबभन्दा ठूलोमध्येकै दातृ राष्ट्र हो । दाताहरुसँग महŒवपूर्ण छलफल र भेटघाटमा व्यस्त भइरहनुपर्ने पदमा बसेकी उनको उमेर छ, करिब ८० वर्ष । उनी जापान गएयता दातृ संस्थासँग कुनै प्रगति भएको छैन । उता, म्यानपावर कम्पनीहरुको ‘सेटिङ’अनुरुप ‘हाउसमेड’ का नाममा नेपाली चेलिबेटीको खुलेआम बेचबिखन चल्ने ओमनमा म्यानपावर सञ्चालिका नै राजदूत भएर बस्दा अवैध रुपमा ‘हाउसमेड’ चेलीलाई जबरजस्ती भिœयाउने क्रम तीव्र भएको छ ।
यी दुई महिलाले यस्तो बितण्डा मच्चाइरहँदा अष्ट्रेलियाका लागि राजदूत भएर गएकी लक्की शेर्पाले चाहिँ अर्थ र परराष्ट्रलाई कुनै दुःख नदिई दूतावास भवन निर्माणको लागि सिड्नीमा जग्गा खरिद गरिन् । उनका पनि आर्थिक मामिला अर्थमा नपुगेका छैनन् । तर, ‘देखाइदिन्छु’ भनेर कर्मचारीलाई औँलो तेस्र्याएकी छैनन् ।
उता, कमल थापाको कोटामा स्पेनको लागि राजदूत सिफारिस भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएका पूर्वजर्नेल भरतबहादुर रायमाझीलाई देउवा सरकारले जाते–जाते त्यता पठाएको छ । उनी जनवरीको २४ तारिख, अर्थात् माघ १० गते म्याड्रिड उत्रिएका हुन् । स्पेनमा नेपाली राजदूत पठाइएको पहिलोपटक हो । त्यहाँ दूतावास भवन छैन । सामान्यतया नयाँ दूतावास स्थापना गरिँदा परराष्ट्रका करिअरवाल अधिकारी पठाउने गरिन्छ । यसअघि नयाँ दूतावास खोलिएका देशमा भवन, प्रशासनिक व्यवस्थापन र आर्थिक विषयहरु संयोजन गर्न पनि परराष्ट्रकै प्रथम श्रेणीका अधिकृत राजदूत बनाएर पठाइएको थियो । त्यहाँ पुगेको एक महिना बितिसक्दा पनि राजदूत रायमाझीले अहिलेसम्म ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश गर्न पाएका छैनन् । न उनको अफिस छ, न काम नै । एउटा देशबाट अर्को देशमा जाने राजदूतले त्यहाँको राष्ट्रप्रमुखसमक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र पेश नगरी काम गर्न पाउँदैनन् ।